FOCAC အစည်းအဝေးက တရုတ်-အာဖရိက ဆက်ဆံရေးတွင် သမိုင်းမှတ်တိုက်သစ်အဖြစ် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ချီးကျူးပြောကြား - Xinhua News Agency
အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ၊ မာလာဘိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော တရုတ်နိုင်ငံမှလှူဒါန်းသည့် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဒတ်ကာ၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး (FOCAC) သည် တရုတ်-အာဖရိက ဆက်ဆံရေးတွင် သမိုင်းမှတ်တိုင်သစ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ဝဲ) နှင့် ဆီနီဂေါနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Aissata Tall Sall တို့ ဒတ်ကာမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ၂၈ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ယာ) နှင့် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Frederick Shava တို့အား ၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး (FOCAC) ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ကတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ယာ) နှင့် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီး Veronica Macamo တို့အား ၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး (FOCAC) ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ကတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ယာ) နှင့် ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီး David Francis တို့အား ၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး (FOCAC) ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ကတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝမ်သည် ဆီနီဂေါနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Aissata Tall Sall နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အခါသည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုအတွက် အရေးပါသော အခိုက်အတန့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆီနီဂေါနိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှုကို ကျော်လွှားခြင်းဖြင့် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ကွန်ဖရင့်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် အာဖရိကနိုင်ငံများစွာ၏ မျှော်လင့်ချက် ထက်သန်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကတို့မှ အခက်အခဲများ ပူးတွဲကျော်လွှားရန်နှင့် ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေရန်နှင့် အနာဂတ်မျှဝေမှုရှိသော တရုတ်-အာဖရိက အသိုက်အဝန်းအား တစ်ဖန်ပြန်လည်ထင်ထင်ရှားရှား ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကတို့က မျှဝေသွားမည်ကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအစည်းအဝေး ကျင်းပရန် အရေးပါသော ကူညီပံ့ပိုးမှုများအတွက် ဆီနီဂေါနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
FOCACတရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကကြား လက်တွေ့ကျသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စုပေါင်းဆွေးနွေးမှုနှင့် ထိရောက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အရေးပါသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်ဖက်လုံးက နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအရ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနမူနာနှင့် ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံ ဖြစ်လာကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
ဖိုရမ်ထူထောင်ချိန်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အာဖရိကအတွက် ရထားလမ်း ကီလိုမီတာ ၁၀,၀၀၀ ကျော်၊ အဝေးပြေးလမ်းမ ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး၊ တံတား ၁,၀၀၀ စင်းနီးပါး၊ ဆိပ်ကမ်း ၁၀၀ ခုနှင့် စွမ်းအင်အဆောက်အအုံ ၈၀ ကျော်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အာဖရိကရှိ နိုင်ငံများအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ၁၃၀ ကျော်၊ အားကစားရုံ ၄၅ ခုနှင့် စာသင်ကျောင်း ၁၇၀ ကျောင်းနှင့် နယ်ပယ်စုံရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၁၆၀,၀၀၀ ကျော်ကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ် ဆောင်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များအနေဖြင့် အာဖရိကရှိ လူနာ ၂၃၀ သန်းအား ဆေးကုသမှုပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကမကထပြုလျက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရေးဝန်ဆောင်မှုက အသုံးပြုသူ သန်း ၇၀၀ နီးပါးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အောင်မြင်မှုများကို အာဖရိကတစ်ဝန်းတွင် မျက်မြင်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ဒေသခံ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် မိသားစုများတွင် ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကကြားရှိ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ကူညီမှုများက အာဖရိက၏ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ တောင့်တင်းခိုင်မာသည်သာမက အာဖရိက၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းဆောင်ရွက်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်-အာဖရိက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၏ ခမ်းနားလှသော ပန်းချီကားတစ်ချက်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ပေကျင်း ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ၇ ကြိမ်မြောက် FOCAC ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးများပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကတို့သည် ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှုကို ကျော်လွှားလျက်ရှိကြောင်း၊ “အဓိကဆောင်ရွက်မှု ၈ ခု”ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းနှင့် တူညီသောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ထည့်သွင်းထားခဲ့ကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကကြား နှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုသည် ယခုနှစ် ပထမ ၁၀ လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀၀ ကျော်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် မြင့်မားသော အဆင့်သစ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဖရိက၏ ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် နေ့စဉ် တိုးတက်မှုမှာ တရုတ်-အာဖရိက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအတွက် နယ်ပယ်အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တရုတ်နှင့် အာဖရိက ပြည်သူများထံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မျှဝေခြင်းနှင့် အကျိုးကျေးဇူးအသစ်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဖိုရမ်အသစ်အား မကြာမီကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဖရိကရှိ နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် ဖိုရမ်မှ ရလဒ်များအပေါ် မျှော်လင့်ချက်များ မြင့်မြင့်ထားရှိကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့် ဒတ်ကာအပေါ် အလေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် ဆီနီဂေါနိုင်ငံ သမ္မတ Macky Sall တို့နှစ်ဦးလုံးသည် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ အရေးပါသောမိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတ ရှီ အနေဖြင့် တရုတ်-အာဖရိက ကူးလူးဖလှယ်မှုများ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော လမ်းကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သလို အာဖရိနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဓိကဆောင်ရွက်ချက်အသစ်များစွာကိုလည်း ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကတို့သည် ခေတ်သစ်တွင် ကံကြမ္မာအကျိုးတူ တရုတ်-အာဖရိကအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်းနှင့် လာမည့်သုံးနှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းကာလများ၌ တရုတ်-အာဖရိက ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ခု ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆီနီဂေါနိုင်ငံတို့အပြင် ဖိုရမ်တွင်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနှင့်အတူ အစည်းအဝေးသည် အောင်မြင်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရာ၌ အာဖရိ၏ “နှစ်ထပ်ကွမ်းအောင်မြင်မှု” ကို ကူညီထောက်ပံ့မှုအသစ်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖိုရမ်သည် ခေတ်သစ်တွင် ကံကြမ္မာအကျိုးတူ တရုတ်-အာဖရိက အသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် ကြီးမားသော ခရီးအသစ် စတင်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-29 23:12:25|Editor: huaxia
DAKAR, Nov. 29 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said here on Sunday that the 8th Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) will beanew milestone in China-Africa relations.
Wang made the remarks atajoint press conference with Senegalese Foreign Minister Aissata Tall Sall after their meeting.
Noting that the present is an important moment for the world’s anti-pandemic fight and economic recovery, Wang said Senegal has met the ardent expectations of various African countries to hold the conference on schedule by overcoming the impact of the pandemic, which demonstrates the firm will shared by China and Africa to jointly overcome difficulties and seek common development, and again vividly reflects the China-Africa community withashared future.
Wang re-expressed his thanks to the Senegalese government and people for their important contributions to the convening of this conference.
FOCAC, Wang said, is an important platform for collective dialogue and an effective mechanism for practical cooperation between China and Africa, and has becomeaparadigm of international development cooperation andamodel for South-South cooperation thanks to 20 years of joint efforts by both sides.
Since the establishment of the forum, Chinese enterprises have built for Africa more than 10,000 km of railways, nearly 100,000 km of highways, nearly 1,000 bridges, 100 ports and more than 80 large-scale power facilities, said Wang, adding that Chinese firms have also helped countries in Africa build more than 130 medical facilities, 45 gymnasiums and more than 170 schools, and trained more than 160,000 professionals in various fields for the continent.
He also noted that Chinese medical teams have so far treated 230 million patients in Africa, andanetwork service sponsored by China is serving nearly 700 million user terminals, saying that nowadays, the achievements of China-Africa cooperation can be witnessed across Africa and felt in local communities and families.
Solidarity and mutual assistance between China and Africa have not only consolidated Africa’s independent political status, but also enhanced Africa’s sustainable development capacity, presentingamagnificent picture of China-Africa friendship, he added.
After the 2018 Beijing Summit and the 7th Ministerial Conference of FOCAC, China and Africa have overcome the impact of the pandemic, implemented the “eight major initiatives” and put in place the corresponding financing support, Wang said, adding that bilateral trade between China and Africa in the first 10 months of this year exceeded 200 billion U.S. dollars, and is expected to reachanew high by the end of 2021, making China Africa’s largest trading partner for 13 consecutive years.
He also said that the daily progress in China-Africa cooperation is opening up new horizons for China-Africa friendship, creating new opportunities for shared development and bringing new benefits to the Chinese and African people.
The new forum will be held soon, Wang noted, saying that people of all African countries have placed high hopes on the outcome of the forum, and the eyes of the world will focus on Dakar.
Both Chinese President Xi Jinping and Senegalese President Macky Sall will deliverakeynote speech at the opening ceremony, said Wang, adding that Xi will also summarize the glorious course of China-Africa exchanges and announceaseries of new major measures on China’s cooperation with Africa.
China and Africa will aim at building the China-Africa community withashared future inanew era, and chart outablueprint for the development of China-Africa relations in the next three years and beyond.
With the joint efforts of China and Senegal as well as all members of the forum, the meeting will beacomplete success, and make new contributions to Africa’s “double victory” in beating the pandemic and restoring the economy, Wang said, adding that the forum will also kickstartanew great journey for the building of the China-Africa community withashared future inanew era. ■
1-China-donated Sinopharm COVID-19 vaccines arrive in Malabo, Equatorial Guinea, Feb. 10, 2021. China-Africa cooperation is bearing fruits and unleashing huge potential with the high-quality implementation of the “eight major initiatives,” put forward at the Beijing summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) held in September 2018. (Photo by Li Boyuan/Xinhua)
2-Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (L) and Senegalese Foreign Minister Aissata Tall Sall attendajoint press conference in Dakar, Senegal, Nov. 28, 2021. (Xinhua/Liu Chang)
3-Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (R) meets with Zimbabwean Foreign Minister Frederick Shava ahead of the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Dakar, Senegal, Nov. 28, 2021. (Xinhua/Liu Chang)
4-Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (R) meets with Mozambican Minister of Foreign Affairs and Cooperation Veronica Macamo, ahead of the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), in Dakar, capital of Senegal, Nov. 28, 2021. (Xinhua/Liu Chang)
5-Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (R) meets with David Francis, Sierra Leonean minister of foreign affairs and international cooperation, ahead of the 8th Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Dakar, Senegal, Nov. 28, 2021. (Xinhua/Liu Chang)